सवारी दुर्घटनामा परी ६ जना घाईते, एकको अवस्था चिन्ताजनक : RajdhaniDaily.com -
Home प्रदेश सवारी दुर्घटनामा परी ६ जना घाईते, एकको अवस्था चिन्ताजनक
सर्लाही। सर्लाहीमा बरहथवा नगरपालिकामा भएको छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा परी छ जना घाईते भएका छन भने एक बालिकाको अवस्था चिन्ता जनक रहेको छ । मंगलवार बरहथवा नगरपालिका वडा नं. ७, स्थित बरहथवाबाट फुलपरासी तर्फ जाँदै गरेको बिआर ३० पि ए ०७०७ नम्बरको भारतिय टेम्पु आफै अनियन्त्रित भई पल्टिदा टेम्पोमा सवार दुई बालिका,एक बालक र एक जना महिला गरी चारजना घाईते भएका छन भने एक जना बालिकाको अवस्था गम्भिर रहेको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ ।
घाईते हुनेहरुमा एकै परिवारका बरहथवा नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने राम विश्वास राय यादबको ६ वर्षिया छोरी रिया कुमारी यादवकै ७ वर्षिया अर्की छोरी नेहा कुमारी ,२५ वर्षिया श्रीमती सुशिला देबि यादब रहेका छन । भने गोडैता नगरपालिका वडा नं.८ बस्ने चन्द किशोर यादबको ८ वर्षिया छोरीः निशा कुमारी पनि घाईते भएक छिन । घाईते चार जना मध्ये रिया कुमारी अवस्था गम्भिर रहेको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ । घाईते चारै जनाको उपचारको लागी गोल्डेन अस्पताल बरहथवामा ल्याईएको ईलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवाले जनाएको छ ।
यसै बिच मंगलवारनै बरथवा नगरपालिका वडा नं. ३ झिङ्याहिमा ना.३ ख ५६३४ नं स्टारलाईन बोडिङ स्कुल बसको टाईर पम्चर भई अनियन्त्रि भई विपरित दिशाबाट आउदै गरेको ज १ प ४२१३ नम्बरको मोटरसाइकल र साईकललाई ठक्कर दिदाँ दुई जना घाईते भएका छन ।
घाईते हुनेहरुमा वडा नं. २ बस्ने मोटरसाइकल चालक २५ वर्षिय रामदेयल महतो र सोहि वडा बस्ने साईकल चालक १० वर्षिय राकेश महतो रहेका छन । घाईते दुवै जनाको शरिरको विभिन्न भागमा काटिएको र चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घाईतेहरुलाई उपचारको लागि बिरगंज तर्फ पठाईएको र बसमा सवार बिधार्थीहरु सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ । ठक्कर दिने स्कुल बस,चालक,र मोटरसाईकल प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतित सिंह राठौरले जानकारी दिनु भएको छ ।
पिजानिक बार्सिलोना जाने
Not-to-be-missed Kumar Raut - May 10, 2020 0
टुरिन । बोस्निया तथा इटालियन क्लब युभेन्टसका मिडफिल्डर मिरालेम पिजानिक आउँदो समरमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोना आउन सहमत भएको छ । इटालियन सञ्चारमाध्यमका अनुसार बोस्नियाका...
प्रदेश ६ Sushila Bishwokarma - March 21, 2020 0
भर्खरै Roshan Shrestha - May 13, 2020 0
अर्थ Sushila Bishwokarma - October 20, 2020 0
Editor-Picks Sushila Bishwokarma - March 5, 2020 0
काठमाडौँ । सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भित्रिन नदिन मुलुकमा थप सावधानी अपनाउन थालेको छ । मास्क, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउँदै स्वास्थ्य परीक्षण...
खेल Sushila Bishwokarma - December 3, 2020 0